Mucaaradka dalka Tanzania oo ku baaqay dastuur cusub | Star FM
Home Caalamka Mucaaradka dalka Tanzania oo ku baaqay dastuur cusub
Mucaaradka dalka Tanzania oo ku baaqay dastuur cusub
Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Tanzania Freeman Mbowe ayaa ugu yeeray maamulka cusub ee wadankaasi in uu mudnaanta koowaad siiyo dastuur cusub oo wax looga beddelaya xeerarka wadankaasi kaas oo xadidaya awoodda madaxweynaha.
Mr .Mbowe oo ah madaxa xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ee Chadema ee dalka Tanzania, ayaa khudbad uu dhawaan jeediyay ku sheegay in dastuurka hadda dalkaasi laga isticmaalo uu awood u siinayo qofka hoggaanka haayo inuu kaligii taliye noqdo ama boqor sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu intaa ku daray in mudnaanta dowlad dhiska ay ahaato jadwal iyo qaab howleed lagu beddelayo dastuurka.
Waxaaa uu dhanka kale ugu baaqay madaxweynaha dalka Tanzania Saamiya Suluhu Xasan inay si dhow ula socoto soo jeedin ay dhawaan soo badhigtay ee ka dhan xaaladaha fayraska Corona ee dalkaasi si loo magacaabo guddi khuburo caafimaad ka kooban oo baaraya COVID-19.
Xilka madaxweynenimo ee dalkaas ayaa waxaa dhawaan la wareegtay Samiya Suluhu Xasan ka dib geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Tanzania Dr. John Pombe Magufuli oo ay ku xigeen u ahayd oo u geeriyooday xanuun dhanka wadnaha ah.
Previous articleMid ka mid ardayda sameeynaya imtixaanka qaran ee KCSE-da oo Kitui lagu dilay
Next articleTaalibaan oo aan ka qayb galeyn shirka Turkiga haddi toddobaadkan la qabto